प्रहरीले भने, ‘होटल बन्द गर्नुस‌्‌’, सञ्चालकले भने, ‘सरुवा गरिदिउँ ? – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/प्रहरीले भने, ‘होटल बन्द गर्नुस‌्‌’, सञ्चालकले भने, ‘सरुवा गरिदिउँ ?
यतिखेर कोरोना महामारी फैलन नदिन देशका पाँचतारे होटलहरू नै बन्दप्राय: छन्‌। तर पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट टिसियन चोकमा एउटा यस्तो खाजाघर छ, जहाँका सञ्चालकलाई न कोरोना महामारीको चिन्ता छ, न त उनलाई देशभर लागेको लकडाउनले छोएको छ। निर्वाध खाजाघर चलाइरहेका उनी जनप्रतिनिधि र प्रहरीलाई नै धम्क्याउँछन्‌ र भन्छन्‌, ‘सरुवा गरिदिउँ?’ उनले धम्की पाएपछि अनुगमनमा गएका अधिकारीहरू मलिनो अनुहार लिएर फर्कन्छन्‌। लामा खाजा घरका सञ्चालक हुन्‌ : प्रेम बहादुर लामा।